Tantaran'ny CEO - Sun Master International Limited
Terry dia naka toerana ambony isan-karazany amin'ny indostrian'ny mpamokatra isan-karazany toy ny mpivarotra vy, Aluminium Sales extrusion Manager talohan'ny naha-CEO an'ny Sun Master Internatinal Ltd izay mpanamboatra fanaka ivelany sy famolavolana endrika mifantoka amin'ny trano fandraisam-bahiny, rendrarendra, patio, fampiasana fifanarahana. Teraka tany Hong Kong izy ary nifindra monina tany Canada tamin'ny taona 1988 izay lehibe tao Vancouver.
Terry dia nahazo diplaoma tao amin'ny Oniversiten'i Victoria tao BC Canada ho an'ny Bachelor of Art izay nitondra azy fototra miaraka amin'ny fahatsapana ny famolavolana vokatra vaovao. Nanampy ny maro tamin'ny mpanjifany izy tamin'ny famolavolana sy ny famokarana maodely hatramin'ny 1500+ fanaka ivelany miaraka amin'ny 18 taona niasany tao Sina.
Noheveriny ho mpamorona fanaka ivelany be za-draharaha izy fa mahay mamokatra saika ny zavatra rehetra ilain'ny mpanjifa.
- Drafitra fandraharahana stratejika sy fampandrosoana orinasa
- famolavolana sy fanamboarana latabatra maharitra, fipetrahana, seza, fipetrahana patio ary fitoeran'ny masoandro
- Exhitbiton any Alemana Spoga, Index Dubai, Salone Del Mobile Milano, CIFF, Canton Fair, Shanghai International Furniture Fair, USA NHS / National Hareware Show, fitaovana enta-mavesatra sy kojakoja zaridaina, USA International Furniture and Accessories Market Merchandise Mart Properties, Miami Hospitality seho famolavolana, RUSSIA Mebel, famolavolana fandraisana vahiny ao Sydney.
- Drafitra fitantanana mpiasa 300 mahery
- alao antoka fa mihodina ao anatin'ny fenitra BSCI ny ozinina
- fanaraha-maso ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny famokarana
- 15 taona traikefa amin'ny fanamboarana fanaka ivelany, fitrandrahana aliminioma, firakotra vovoka ary fanodinana Anodize miaraka amin'ny fenitra manara-penitra iraisam-pirenena.
- Ny varotra Sun Master isan-taona Volume USD 12-15 tapitrisa ary ezaho ny fitomboana 20% isan-taona raha ny fanaka ivelany kosa dia malaza eto amin'izao tontolo izao. Mino mafy aho fa manome lanja ny namako rehetra, ny mpiara-miasa amiko ary ny tsena.